Articles – My Life Magazine
दुई लाख भन्दा बढी नेपाली पासपोर्ट इन्टरपोलको रेकर्डमा
ArticlesNovember 26, 2019
राहदानी विभागले हराएको २ लाख ६ हजार ८ सय ६६ पासपोर्ट इन्टरपोलमा राखेको जनाएको छ । विगत ९ वर्षदेखि हराएका र चोरी भएका नेपाली पासपोर्ट दुरुपयोग रोक्नका लागि इन्टरपोलमा राखेको राहदानी विभागले जनाएको छ ।…
कसरी सुरु भयो खोप? के काम गर्छ?
ArticlesOctober 31, 2019
बिबिसी- बितेको शताब्दीमा खोपले करोडौँ मानिसको ज्यान जोगाएको छ। तर पनि कतिपय देशका स्वास्थ्य विज्ञहरू त्यहाँ खोपप्रति हिच्किचाहटको प्रवृत्ति बढ्दो रहेको बताउँछन्। यो प्रवृत्तिप्रति विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) यति चिन्तित छ कि उसले यसलाई सन् २०१९…
एक नेपालीको टाउकोमा ३९,३१६ रुपैयाँ ऋण
पवन तिमिल्सिना नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋण ३९ हजार तीन सय १६ रुपैयाँ ऋण पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष सरकारको ऋण थपिएका कारण प्रतिव्यक्ति ऋण पनि बढेको हो। गत आर्थिक वर्ष प्रत्येक नेपालीलाई चार हजार सात सय…
देशभर सवारीसाधन दुर्घटना बढ्यो, यस्तो छ कारण
ArticlesJuly 28, 2019
काठमाडौँ- देशभर सवारीसाधन खरिदबिक्री बढेसँगै दुर्घटनामा समेत वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा देशभर सवारीसाधन दुर्घटनामा दुई हजार ७८९ जनाको मृत्यु भएको छ । सो अवधिमा १३ हजार ३६६ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका थिए…
चालकहरू लागू पदार्थको लतमा
ArticlesJuly 24, 2019
पृथ्वीराजमार्गमा गुड्ने सार्वजनिक यातायातका चालकले लागू पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ । मादक पदार्थ सेवन गरेको यात्रु, गाडी धनी तथा प्रहरीले थाहा पाउने भएपछि चालक र सह-चालक चरेस र गाँजाको विकल्पमा लागेका हुन् । जिल्ला प्रहरी…
अन्डाको आयु कति हुन्छ?
अञ्जु तामाङ बजारमा अस्वस्थकर अन्डाको बिगबिगी ! भारतमा एउटा विज्ञापन खुब चर्चित थियो, ‘सन्डे हो या मन्डे, रोज खाओ अन्डे ।’ मतलब हरेक दिन अन्डा खाऔँ र स्वस्थ रहौँ । यो विज्ञापन मुख्यतः बालबालिकाका लागि…
वेद के हो ? चारै वेदको संक्षिप्त परिचय
ऋग्वेद वेदहरूमा सर्वप्रथम ऋग्वेदको निर्माण भयो । यो पद्यात्मक छ । यजुर्वेद गद्यात्मक छ भने सामवेद गीतात्मक छ । ऋग्वेदमा १० मण्डल, १०२८ सूक्त र ११ हजार मन्त्र छन् । यी मन्त्रहरूमा देवताको स्तुति गरिएको…
वैज्ञानिकले भेटे विराटनगरमा तीन प्रजातिका जंगली धान, संरक्षणको…
ArticlesOctober 4, 2018
मोरङ – विराटनगर महानगरपालिकामा हराउन लागेको जंगली धान फेला परेपछि वैज्ञानिकहरुले त्यसको उद्दार गरेका छन् । जंगली धान पहिला कोशी टप्पुमा पाउँदै आएकोमा त्यहाँको धान हराएपछि पूर्वमा जंगली धान पाउनै मुस्किल थियो । विराटनगर महानगरपालिका…
बदलिँदै छ जिन्दगी, अब शिशु हुर्काउन आमाबुबा चाहिँदैन
ArticlesOctober 3, 2018
भनिन्छ, एउटा बच्चा हुर्काउन पुरा गाउँ जुट्नुपर्छ । यसको अर्थ हो, आमाबुबाले आफ्नो बच्चा हुर्काउनको लागि धेरैको सहयोग लिन्छन् । तर, प्रविधि यति चलाख भयो भने तपाईंलाई अरुको सहयोगको आवश्यकता नै पर्दैन । भर्खर-भर्खरै आमाबुबा…
बन्ने भयाे हिलपार्कमा बुद्ध मूर्ति: बुटवलककाे १५ वर्षे…
ArticlesSeptember 19, 2018
दीपक घिमिरे, बुटवल बुटवल उप–महानगरपालिकाले पहिलो वर्षलाई अध्ययन वर्षका रुपमा लिँदै अब समृद्धिको आधार वर्षका रुपमा महत्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाउने भएको छ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्र्दै उपमहानगरपालिकाले ५ वर्षे आवधिक तथा १५ वर्षे दीर्घकालीन विकास…